HOLAC: Min Atletico Madrid, Villarreal Ilaa Espanyol-Barcelona Oo Soo Bandhigtay Kulamada Ay 2018 Ku Difaacan Karto Hogaaminta La Liga Iyo Koobkanba. - GOOL24.NET
HOLAC: Min Atletico Madrid, Villarreal Ilaa Espanyol-Barcelona Oo Soo Bandhigtay Kulamada Ay 2018 Ku Difaacan Karto Hogaaminta La Liga Iyo Koobkanba.
Kooxda Barcelona ayaa xili ciyaareedkan dhibco badan ku soo lumisay 12 kii kulan ee horyaalka La Liga ugu horeeyay laakiin waxay wali is arkaysaa iyada oo hogaaminaysa koobka ay horyaalkiisa difaacanayso iyada oo uga mahad celinaysa in kooxihii qaladaadkeeda ka fii’iidaysan lahaa ay iyaguba dhibtoonayaan.
Si ka duwan xili ciyaareedyadii hore kooxaha Barcelona, Real Madrid iyo Atletico Madrid ayaa dhibco badan luminaya balse kooxda Barcelona ayaa shabakada rasmiga ah ee kooxdeeda ku soo daabacday shanta kulan ee ay doonayaan in ay hogaanka iyo koobka La Liga ku sii difaacan karaan.
Shanta kulan ee ay Barcelona soo bandhigtay in ay kooxdeeda ka caawin karaan hogaaminta La liga iyo in ay koobka sii difaacan karto waxaa ku jira afar kulan oo dab ah waana kulamada ay ciyaari doonto bisha iyo badhka ka hadhsan sanadkan 2018 inta aan la galin fasaxa qaboobaha ee horyaalka La Liga.
Haddaba waxaanu halkn idiinku soo koobnay shanta kulan ee ay Barcelona sida faah faahsan ugu sheegtay in ay kooxdeeda ka caawin karaan difaacashada La Liga iyo waliba in ay sii xejistaan hogaanka La Liga halkan ayaanad kaga bogan kartaaa.
1-Atlético de Madrid – FC Barcelona (24/11 ): Barcelona ayaa sabtida November 24, waxay booqan doontaa kooxda Atletico Madrid waana kulanka ugu horeeya ee shanta kulan ee ay Barcelona ciyaari doonto horyaalka La liga inta aanu sanadkani dhamaan.
Kulanka Atletico Madrid ee Wanda Metropolitano waa kulan si cad u qeexi kara xaalada Barcelona iyo in ay sii xejisan karto hogaanka La Liga iyada oo labada kooxoodba ay raadin doonaa qaabkii ay saddexda dhibcood ee lixda dhibcood la qiimaha ah ku heli karaan.
Kulanka Atletico Madrid ayaa si buuxda loogu tilmaami karaa kulanka ugu adag ee ay Barcelona ka ciyaari doonto horyaalka La Liga inta lagu jiro sanadkan galbaday ee 2018.
2-FC Barcelona – Villarreal (2/12,2018 ): Kadib kulanka Atletico Madrid waxay Barcelona soo dhawayn doontaa kooxda dhibta badan ee Villarreal waana kulanka ugu horayn doona ee La Liga ah ee ay Barcelona ku ciyaari doonto Camp Nou kadib bahdilaadii Real Betis ee kulankii ugu danbeeyay.
Barcelona waxay kulanka Villarreal ka soo muuqan doontaa iyada oo xaaladeedu ku xidhnaan doonto natiijada kulanka Atletico Madrid iyo waliba natiijooyinka kooxaha kale waana kulan kale oo aad ugu adkaan doona kooxda Valverde waana la ciyaari doonaa Decembe 2, 2018.
3-RCD Espanyol – FC Barcelona (8/12,2018 ) Kulanka saddexaad ee La Liga ay Barcelona ciyaari doono marka laga noqdo kulamada caalamiga ah ayaa noqon doona kulanka Catalan Derby oo ay barcelona booqan doonto kooxda ay cadaawada wayni u dhexayso ee Espanyol.
Kooxda Espanyl ayaa xili ciyaareedkan ku jirta xaaladii kooxdeeda ugu fiicnayd sanado badan waxayna u tartamaysaa kaalmaha UEFA Champions League loogu soo baxo iyada oo haddba saddex dhibcood oo kaliya ka hoosaysa Barcelona.
In Barcelona ay iskugu xigaan kulamada Atletico Madrid, Villarreal iyo Espanyl waxay muujinaysaa in Valverde uu markale gali doono xaalad la mid ah kulamadii Sevilla, Real Madrid iyo Inter Milan kuwaas oo ay si fiican uga soo dabaasheen balse markan xaaladu way ka sii adag tahay.
4-Levante UD – FC Barcelona (16/12,2018 ) Barcelona ayaa kadib booqan doonta kooxda Levante waana kulan loo arki karo in uu aad uga sahlan yahay kulamada hore balse kooxda Levente ayaa bandhigyo fiican ku samaysa garoonkeeda waana arin aanu Valverde dhayalsan doonin.
5-FC Barcelona – Celta (22/12,2018) Barcelona ayaa kulanka Celta Vigo waxay ku soo xidhan doontaa sanadkan 2018 ee kulamada horyaalka La Iga iyada oo Camp Nou ku qaabili doonta kooxda ay dhibaatada badan kala soo kulantay xili ciyaareedyadii ugu danbeeyay.
Laakiin warka ugu fiican ee uu Valverde heli karo ayaa ah in Celta Vigo ayna rekoodh fiican ku lahayn Camp Nou balse ay dhibaatada ugu badani abuurto marka ay gurigeeda ku marti galin jirtay Barcelona.
Kulanka Celta Vigo waxa uu noqon doonaa kulan ay Barcelona fasaxa qaboobaha ugu bixi doontaa iyada oo qiyaasan karta in koobka La liga ay difaacan karto iyo waliba fursada ay koobkan markale ugu guulasyan karto.empate a 2.